Blockchain News 20.07.2018 - Blockchain News
Chikunguru 20, 2018 arun
Samsung anogamuchira crypto kubhadhara mu 3 Baltic inoti
Samsung ari anonzi kugamuchira cryptocurrency kubhadhara akawanda kuBaltic States vachishandisa crypto mubhadharo papuratifomu CopPay. The kambani Lithuania anotsanangura akaita chiziviso nhasi. Vatengi munyika Estonia, Rativhiya, uye Lithuania achagona kutenga Samsung smartphones, mahwendefa, Laptops, TV rinovira, uye zvakawanda cryptocurrency.
The South Korean nemakambani conglomerate achange kubvuma crypto kubhadhara muna Bitcoin, Litecoin, uye nevamwe. Kuwedzera 3 kuBaltic States, CopPay ane vatengesi dzakawanda kushandisa pachikuva kwayo muPortugal. The kambani vakazivisawo cryptocurrency achakurumidza kuva nzira akadikamwa muripo muna Samsung kuti paIndaneti zvitoro.
Blockchain anotsanangura chikwereti Rating zvakasimba vachimutsa $ 8M mu mari
A startup vachitsvaka kuvaka kadhi scoring dzakati pamusoro imwe blockchain wakamutsa $8 mamiriyoni mbeu mari. PFUNGWA, rakavakwa 2017, Vakati akavhomora mari kubva kunovhengana tsika asingashumbi capitalists, uyewo Zhong Cheng Credit Xin Technology, China yokutanga munyika chikwereti Rating sangano.
Sarah Zhang, muvambi uye CEO pamusoro PFUNGWA, akati: “pari zvino, kana zviri rwezvemabhengi kana kunyoresa panguva crypto Exchange, vanoishandisa vanofanira repetitively Upload Profiles dzavo. Zvichakadaro, Masangano vanofanirawo repetitively ndiitise KYC muitiro manually, inova nguva unoparadza uye kunoita kuti chihombe mashoko chekuchengeta avo kumigumo. Mugumo chinangwa ndiko kupa rokushandisa kadhi Profile sezvo vakakwana sezvinobvira kuitira kuti kuwana zvinhu zvemari kuti zvimwe arege kuwanikwa.”
Coinbase chikuru brokerage inonzi onboards $ 20b ruzhowa Fund
Coinbase akaita yakatanga idzva chikuru brokerage basa ruzhowa mari & akaita anonzi akakwezva Asina $20 bhiriyoni ruzhowa mari: “The zvakasimba akaita onboarded munhu $20 bhiriyoni ruzhowa mari kuburikidza kwayo chikuru bhizimisi, Vanhu vakati, kuderera kuti ishamwari ipi Fund. The chikwata iri kushanda nezvokuchera dzimwe guru ruzhowa mari pana ayo wokutengesera papuratifomu.”
Prime brokerage anobvumira ruzhowa mari kukwereta kubva Coinbase pashure kuisa pasi koratararo, zvino vanogona kuchinjanisa pamusoro dzinoverengeka crypto exchanges pasina kuisa pasi pakati nepakati kana ane kukurira voga makiyi. In ramangwana, Coinbase anogona kupa kuurayiwa mabasa apo vanogona kubatsira ruzhowa mari kutsvaka zvakanaka pachikuva kuti basa.
Marita Stock Exchange inks zveefa kuvaka kuchengeteka chiratidzo exchanges
MSX, achangobva raparurwa fintech ruoko cheMarita Stock Exchange, akaita inked zveefa akawanda matsva zvainanga asika mumisika itsva tokenized kuchengetedzeka.
Imwe ngaakuitirei ndiko kuvaka “yaidzorwa uye decentralized, pose wemari mukutsinhana Pachikamu uye zvokutengeserana tokenized kuchengetedzeka pedyo crypto-zvinhu.” itsva kuwana, chikuva kuti kuchengetedzeka tokenization uye issuance, kwakauraya kuchikuva itsva vachava “wokutanga mugumo-to-kuguma vanonyanya issuance papuratifomu kuchengeteka zviratidzo.” Joseph Portelli, sachigaro cheMarita Stock Exchange, akadana basa iri “piyona digitaalinen mari” akati “Tinofara kugamuchira Neufund sezvo yedu anokosha naye pakuvaka mukutsinhana blockchain anotsanangura kuti zvakazara revatema pamwe misika yemari kusimbiswa.”
In kufanana nhau, crypto Exchange OKEx rave partnered pamwe MSX kuti nokuparura mumwe rate itsva - inonzi OKMSX - nokuti wokutengesera ose “giredhi zvechechi” chibatiso zviratidzo. Chikuva kutarisirwa vomurova kubudikidza Q1 kwegore rinouya.
Kraken Daily Market Mushumo 19.07.2018
$139M nhumbi mhiri misika zvose nhasi
EOS Airdrops Explained!! chido ...
Hey Altcoin Daily Team, How a...
Investing - Earn $10 A MONTH w...
Bitcoin To Surpass Visa, Maste...
Bitcoin retraced last night, h...
Previous Post:Blockchain News 19.07.2018
Next Post:Blockchain News 21.07.2018
pamusoro 10 Cryptocurrencies For Massive Price Gains In Coming Bull Run